नारीको इज्जतको मुल्य १० हजार होर सरकार ? » Enavanari
नारीको इज्जतको मुल्य १० हजार होर सरकार ?
भर्खरै मात्र ललितपुरमा एउटा घटना घट्यो । युवती बलात्कृत भईन् । उनी बलात्कृत भएको कुरा अदालत सम्म पुग्न सफल भयो । उनलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष जेल सजाय र १० हजार रुपैँया जरिवाना अदालतले तोकिदियो । आठदिनको अवधिमा दुई पटक बलात्कृत भएकी ती किशोरीलाई अदालतले न्यायदिने नाउँमा १० हजार जरिवाना तोकिदियो तर त्यो जरिवाना उनले अझै पनि पाउन सकेकी छैनन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधगर्दा पनि जम्मा १० हजार रुपैयाँ जरिवानातोक्नु कत्तिको न्याय वा अन्याय के भयो होला । यसलाई पिडितले न्यायको रुपमा बुझ्न सक्लान त ? सम्पुर्ण तह र तप्कामा महिलाहरुको सहभागिता धेरै भएको बेलामा पनि यस्तो घटना घट्दा हास्यस्पद नहोला र ? बढ्दो बलात्कार नियामक पक्षले हत्तोत्साहित गर्नुको साटो प्रोत्साहन जस्तो गरेको देख्दा बलात्कारीहरु डराउने वातावरण त यसै पनि भएन नै अर्को कुरा यत्रो ठुलो अपराधको सजाय १० हजारमा तुलनागर्दा महिलाको अस्तित्वमा नै औला उठ्ेको छ ।
एउटी कुमारीको कुमारीत्वको मुल्य १० हजार भन्दा कानुनी पक्षलाई सेमसेम पप्पी सेम भन्न मन लाग्यो । उपत्यकामामात्र पछिल्लो ६३–६४ को आंकडा अनुसार १३५ जना बलात्कार भएका थिए भने त्यसको संख्या दिनप्रतिदिन घट्नुको साटो अझै बढी रहेको छ । ललितपुरको घटना एउटा प्रतिनिधी घटना मात्र हो । त्यस्ता बलात्कार भएर क्षतिपुर्ति नै नपाएका र उल्टै आफ्नो अस्तित्वलाई दाउमा राखेका महिला त कत्ति छन् कत्ति । नियमन गर्ने निकायका अभाव नियमनकारी निकायले गरेको विभेदपर्ण निर्णयहरुले गर्दा पनि यस्ता घटनाहरु ओझेलमा पर्छन् । एउटी छोरी आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ रहन नसक्नु र बाहिर हिड्दा पनि ढुक्कले हिड्ने वातावरण नबन्नुमा जति बलात्कारीहरुको हात छ त्यो भन्दा बढी नियमनकारी निकायको छ ।
हामी संग नियम कानुनहरु नबनेका होईनन् यदि पावर र टावर भएका मानिसहरुले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने किशोरीहरु बलात्कृत हुनै पर्दैन । जीवनको सम्पुर्ण दुःख कष्टको अवधीपार गरेर मृत्यु सस्यामा नै पुग्न लागेकी वृद्ध आमा बलात्कृत हुनै पर्दैन् ।